Wararka Maanta: Isniin, Mar 4 , 2013-Faahfaahin ku saabsan Socdaal uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ku Joogo Magaalada Dhuusomareeb (SAWIRRO)
Mudane Saaacid ayaa waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey degmada qaybaha kala duwan ee bulshada, sida: maamulka dowladda, mas'uuliyiin ka socday Ahlusunna Waljamaaca iyo dadweyne fara badan kuwaasoo lulayay caleemo qoyan.
Intaas kaddib ayuu u gudbay xarunta degmadaas halkaas oo ay kumannaan dadweyne ah kuwaasoo watay boorar ay qornaayeen erayo ay wafdiga uu hoggaaminayo ra’iisul wasaaraha kusoo dhaweynayeen iyo sawirada ra'iisal wasaaraha.
Hadal uu ra’iisul wasaaruhu u jeediyay dadweynahaas ayuu uga mahad-celiyay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen, wuxuuna xusay in degmada Dhuusamareeb ay tahay degmadii uu ku dhashay ayna muhiimad gaar ah u leedahay booqashadiisan.
Sidoo kale, ra'iisal wasaaruhu wuxuu u mahadceliyay maamulka Ahlusunna Waljamaaca sida ay isaga difaaceen Al-shabaab oo uu sheegay inay marar badan isku dayeen inay xoog kula wareegaan degmada; balse ay u baabac dhigeen xoogaga Ahlusunna, wuxuuna sidoo kale u mahadceliyay maamulka dowladda ee gobolka iyo degmada.
Ra'iisal wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in booqashadan ay jawaab u tahay booqasho ay mas'uuliyiinta Ahlusunna ku yimaadeen magaalada Muqdisho markaasoo uu ballan-qaaday inuu booqasho ku tegi doono Dhuusamareeb.; waxaana inta uu joogo ra'iisal wasaaruhu kulammo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, sida odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, dhallinyarada, haweenka isagoo kormeero ku sameyn doona qaybaha taariikhiga ah ee degmada.
Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu booqasho middan la mid ah uu ku tago labada casho ee oo socoda degmooyin kale oo gobolka Galguduud ka tirsan, degmada Caabudwaaq oo ka mid ah kuwa ay ka taliso Ahlusunna Waljamaaca.